Ronaldinho oo kula taliyey Kooxda Barcelona inay Lionel Messi meel u dhigaan lambarka 10-aad – Gool FM
(Barcelona) 27 Luulyo 2021. Ronaldinho ayaa kula taliyey kooxdiisii hore ee Barcelona inay meel iska dhigaan lambarka 10-aad, isla markaana aan markale dib loogu ciyaarin,
Waxa uu yiri Ronaldinho: Messi waa inuu sii joogaa Barcelona, iyaguna waa inay howlgab ka dhigaan lambarka 10-aad.
Mustaqbalka Lionel Messi ayaan wali xal rasmi ah laga gaarin, lambarka 10-aad ayaa heshiis la gaaray kooxda si loo cusbooneysiiyo qandaraaska uu kula joogo Barcelona, inkastoo kooxdu aysan wali ku dhawaaqin heshiiskaas.
Xaaladdaas ayay aad uga walaacsan yihiin taageerayaasha Barcelona oo xitaa Messi saaxiibkii hore ee Ronaldinho ayaa si xiiso leh u sugaya in la shaaciyo warka sheegaya inuu heshiis cusub u saxiixay kooxda Barca.
“Messi waa inuu sii joogaa,” Ronaldinho ayaa sidaas u sheegay Warsidaha TuttoMercato.
“Markii uu ciyaaraha ka fariisto, taas oo aan rajaynayo inay waqti dheer kaddib noqon doonto, waa in meel loo dhigo lambarkiisa 10-aad oo uusan qof kale dib dambe ugu ciyaarin.” ayuu hadalkiisa ku daray mucjisadii reer Brazil ee Ronaldinho.
Messi iyo Ronaldinho ayaa iska garab ciyaaray waqtigoodii Barcelona, waxaana xusid mudan in xiddiga reer Argentine uu lambarka 10-aad ee Barca kala wareegay ciyaaryahanka reer Brazil.